ဂျပန်မှာ ဧပြီလကို အစမှတ်လို့ မှတ်ယူရတဲ့အကြောင်းအရင်း - JAPO Japanese News
ဂျပန်မှာ ဧပြီလကို အစမှတ်လို့ မှတ်ယူရတဲ့အကြောင်းအရင်း
ဟူး 22 Dec 2021, 15:21 ညနေ
ဘာလိုလိုနဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကုန်ပြီး နှစ်သစ်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၁ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့ကစပြီး နှစ်သစ် ၂၀၂၂ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်က ကျောင်းရော၊ ကုမ္ပဏီအများစုကပါ ၄ လပိုင်းမှာ အစမှတ်လုပ်ကြတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိပါသလား?
မတ်လမှာ ကျောင်းဆင်းပြီး ဧပြီလကစလို့ နေထိုင်မှုဘဝအသစ်ကို စတင်ကြတာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဥ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံက အရင်တုန်းက လပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့် အဲ့ဒီပြက္ခဒိန်ကနေပဲ ကြည့်ကြည့်၊ ဒီခေတ်ပြက္ခဒိန်ကနေပဲ ကြည့်ကြည့် နှစ်ဝက်နားရောက်ခါနီး ၄ လပိုင်းမှာ အစမှတ်ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရင်းကို ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင် သိပ်မသိကြပါဘူး။
၄ လပိုင်းဟာ အစမှတ်ဖြစ်လာရတာက ဆာမူရိုင်းခေတ်ကုန်သွားတဲ့ ၁၈၈၆ ခုနှစ်ကနေ စပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အရင်က စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ တောင်သူတွေရဲ့ အခွန်ပေးဆောင်ရတဲ့အချိန်ဟာ နှစ်အစမှာ ဖြစ်ပေမယ့် စပါးရိတ်ရတဲ့အချိန်က ဆောင်းဦးရာသီဖြစ်တဲ့ အောက်တိုဘာလ ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်ကွာဟချက်ရှိနေပါတယ်။
အရင်တုန်းက တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ ဆန်စပါးကို အခွန်အဖြစ် တိုက်ရိုက်ပေးချေခဲ့ပေမယ့် ခေတ်အသစ်မှာ ငွေသားနဲ့ ပေးဆောင်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။
2. ရောင်းချ၍ ငွေသားဖန်တီးခြင်း
3. ငွေသားဖြင့် အခွန်ဆောင်ခြင်း
4. အခွန်ပမာဏစုစုပေါင်းကို ကြည့်ပြီး နှစ်သစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်ကို သတ်မှတ်ခြင်း
ကို လုပ်ရတဲ့အတွက် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကြာမြင့်မှုတော့ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် အချိန်ကို ခွာပြီး ၄ လပိုင်းကို အစမှတ်အဖြစ် ပြုလာခဲ့ကြပါတယ်
ဒါ့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထူးခြားတဲ့ဓလေ့တစ်ခုလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ အလုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းအခမ်းအနားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းဟာ ပထမဆုံးအလုပ်တက်ရတဲ့နေ့မှာ အခမ်းအနားတစ်ခုကို တက်ရောက်ရပြီး ဥက္ကဌရဲ့ မိန့်ခွန်းစကားကို နားထောင်ကာ အလုပ်ဝင်ရတဲ့ အလုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းအခမ်းအနားစနစ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းခေတ်တုန်းကတော့ မိဘရဲ့အလုပ်ကို သားသမီးဖြစ်သူက ဆက်ခံပြီး မိဘလုပ်ငန်းကို ကူညီရင်းနဲ့ နေသားတကျဖြစ်လာတာများတဲ့အတွက် အလုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းအခမ်းအနားတွေ မရှိခဲ့ပေမယ့် ခေတ်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်တယ်ဆိုတာ ပညာရှင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်အဖြစ် ပြောင်းလာပြီး အဲ့ဒီအလှည့်အပြောင်းအဖြစ် အလုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းက လုပ်ရိုးလုပ်စဥ်ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် ၃ လပိုင်းမှာ ကျောင်းဆင်းဘွဲ့ရပြီး၊ ၄ လပိုင်းကစလို့ ချက်ချင်းအလုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ဒီချိန်ကိုက်ကို လွတ်သွားတဲ့သူတွေဟာ ပထမအလုပ်ကို တော်တော်နဲ့ မရနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၄ လပိုင်းဆိုတာက ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကာလမှာ ချယ်ရီပန်းလှလှလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာပွင့်တာကလည်း တိုက်ဆိုင်မှုလားတော့ မသိပါဘူး
ဒီချယ်ရီပန်းလေးတွေကို လှလိုက်တာဆိုပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း ကြည့်နိုင်မလား? ဒါမှမဟုတ် အထီးကျန်ကျန်နဲ့ ကြည့်မှာလား? ကတော့ ကိုယ့်အပေါ်ပဲ မူတည်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့ အခုကာလက အပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ပွဲပါ။
အေးချမ်းလှတဲ့ဆောင်းရာသီအကုန်မှာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ နွေဦးရောက်လာမှာကို ယုံကြည်ထားလိုက်နော်။
Corona ကြောင့်စီးပွားရေးပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး၊ လူ ၇ သောင်းခန့်အား အလုပ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အလုပ်ခန့်ရပ်စဲခြင်းများရှိလာ
အလွန်အလုပ်များတဲ့ ၁၂ လပိုင်း။ အလုပ်ရှုပ်တာဟာ သက်ရှိလူသားတွေချည်းပဲမဟုတ်ခဲ့ပါ? ဘိုးဘေးတွေပြန်လာတဲ့ နှစ်သစ်ကူး ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့
ဂျပန်လူမျိုးတွေ ငါးစားများတဲ့ ယဥ်ကျေးမှု